अमेरिकी पोर्न फिल्ममा नेपाली युवती
Stripperkopoi 1637 days ago
Visitor is reading अमेरिकी पोर्न फिल्ममा नेपाली युवती
Visitor is reading BIMAL DANGI CONNECTION
[VIEWED 6353 TIMES]
Posted on 11-26-13 4:16 PM Reply [Subscribe]
I am big fan of Maya Baijin. Many Nepali girls act modern but noone is bold enough to step into the next zone. I don't like Bindu Pariyar though because she does porn and prostitution because she has no other options, while Maya is educated and can get nice jobs but she prefers doing porn. Maya is notaprostitute.
Lotsa maya for Maya and happy thanksgiving Maya. She is the hottest Nepali girl I have seen.
'म माया बेजिन..'
'म नेपालबाट आएकी हुँ..'
...नेपाल कहाँ छ ?
'...चीनको छेउ, इन्डियाको नजिकै....मलाई तिमीहरू इन्डियन ओरिजिन पनि भन्न सक्छौ..'
ँमलाई ओरल सेक्स मन पर्छ, त्यसैले..’
यो अंग्रेजी भाषामा लिइएको एउटा मौखिक अन्तवार्ताको अनुवादित अंश हो । आफूलाई नेपाली बताउने एउटी भर्खरकी युवती अमेरिकामा पोर्न स्टार हुने दौडमा छिन् र उनले केही स्तरीय टि्रपल एक्स चलचित्रमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् । अमेरिकामा पोर्न स्टार अर्थात् नीलो चलचित्रका चर्चित अनुहार बन्न चाहने निकै हुन्छन् । युवापुस्ताको एउटा जमात पोर्न स्टारकै रूपमा भए पनि नाम र दाम कमाउन लालायित भेटिन्छ । ँओस्कार’ एवार्ड जस्तै हरेक वर्षको जनवरीमा ब्लु फिल्म र पोर्न स्टारहरूको ँएभिएन एवार्ड’को भव्य आयोजना हुने गरेको छ । उक्त एवार्डमा आफूलाई खुलेआम ब्लु फिल्मको स्टार भनेर चिनाउनेहरू निकै हुन्छन् र ती हलिउड वा बलिउडका नायक-नायिकाकै हाराहारीमा चर्चामा पनि आउँछन् ।
मायाको त्यही एकमात्र अन्तर्वार्ताका आधारमा उनको नेपाल वा नेपालीसँग कुनै न कुनै रूपबाट संलग्नता छ भन्ने ठहर हुन्छ । उनको भाषा सुन्दा उनी लामो समय अमेरिका बसे पनि उनको मातृभाषा नेपाली नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनले अमेरिकाको यौनचलचित्र उद्योगमा आफूलाई नेपाली भनेर परिचित गराएपछि अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूबीच उनको खोजी सुरु भयो । मायाका तथ्यहरू जति सार्वजनिक हुँदै गए, त्यसले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको नेपाली समाजमा हलचल मच्चायो । प्रवासी नेपालीहरू संलग्न कबवजब।यचन मा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले उनका बारेमा आफ्नो जानकारीहरू लेखेका छन् । आफूलाई 'वैरागी काइँलो' का रूपमा परिचय दिने एक व्यक्तिका अनुसार माया नामधारी ती यौनसुन्दरीको घर भक्तपुरमा छ र उनी आधा नेपाली, आधा भारतीय हुन् ।
आफ्नो परिचयमा 'धराने कान्छा' लेख्ने अर्का व्यक्तिले भने उनी आधा नेपाली होइनन्, पूरै नेपाली भएको दाबी गरेका छन् । पोर्न साइटको अन्तर्वार्तामा मायाले आफू अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको बताए पनि साझा डट ओआरजीमा एक जनाले उनी अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा बसोबास गर्ने युवती भएकी र उनका नेपाली अभिभावकहरू पनि साथै रहेको जनाएका छन् । माया उपत्यकाकै स्थानीय बासिन्दा भएको आफूले छ महिना जतिअघि एक ग्रोसरी स्टोरका नेपाली सञ्चालकबाट थाहा पाएको कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसका साथै मायाले एउटा ब्लु फिल्ममा काम गरेको ८० हजार डलर -लगभग ६० लाख रुपैयाँ नेपाली) पारिश्रमिक लिने गरेको पनि 'ब्याड ब्रेन्स' छद्म नामधारी ती व्यक्तिले जनाएका छन् । छोरीले पोर्न चलचित्रमा काम गर्न थालेको थाहा पाएपछि मायाका अभिभावकहरू नेपालीहरूको समाजमा लज्जित भएको तथा मायाको वास्तविक नाम दीपशिखा झा भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ती व्यक्तिका अनुसार मायाका अभिभावकले उनीसँग सबैखाले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । अर्कातर्फ 'धराने कान्छा'ले भने उनको थर झा नभएर कार्की भएको दाबी गरेका छन् ।
गुगल सर्च इन्जिनमा ःबथब द्यबशष्ल टाइप गरी सर्च गर्दा आफूलाई नेपाली बताउने सेक्स सुन्दरी माया बेजिन अर्थात् दीपशिखा कार्की/झाका भिडियो, अन्तवार्ता, तस्विर आदि फेला पार्न सकिन्छ । थयगतगदभ।अom मा पनि मायाले दिएको एउटा अडिसनको भिडियो हेर्न पाइन्छ । त्यहाँ भने उनले आफूलाई भारतीय बताएकी छिन् । यदि उनी साँच्चै भारतीय हुन् भने दचयतजभचयिखभ।अom मा उनले किन नेपालीमै बोलिन् ? सम्भवतः आफ्नो परिचय लुकाउन मायाले अन्तर्वार्ताको एक दृश्यमा 'भित्र' को साटो हिन्दी शब्द 'अन्दर' प्रयोग गरेकी छिन् ।
आफूलाई नेपाली बताउने अमेरिकी यौन चलचित्रकी स्टार माया बेजिनको वास्तविक नाम दीपशिखा नै हो । उनको एउटा अर्को अडिसनको भिडियो पोर्न साइट दबलनदचयक।अom पनि फेला परेको छ । सेतो स्लिभलेस र जिन्स लगाएकी माया अर्थात् दीपशिखाको अडिसन कुनै रेकर्डिङ स्टुडियोजस्तै देखिने कोठामा लिइएको छ । भिडियोको सुरुवातमै माया भनिएकी उनले आफ्नो नाम दीपशिखा भएको र त्यो नाम नेपाली भएको बताएकी छिन् । भिडियोमा स्वर मात्र सुनिने अडिसन लिने व्यक्ति एक पोर्न स्टार भएको उनीहरूबीचको वार्तालापका क्रममा स्पष्ट हुन्छ । दिनको कम्तीमा दुई युवतीसाग यौनसम्पर्क राख्ने आफ्नो दिनचर्याका बारेमा ती व्यक्तिले हालसम्म ४ हजारजति युवतीसाग सम्पर्क राखेको बताउँदा दीपशिखा चकित परेकी छिन् । दीपशिखाले आफू हाल प्लस टु पढिरहेको र मोजमस्ती गर्न भन्दा पनि ग्य्राजुएसन गर्ने उद्देश्यले स्कुल जाने गरेको बताएकी छिन् । १४ वर्षको उमेरमा २१ वर्षका युवकसाग पहिलो पटक यौनसम्पर्क गरेको र ती युवकसाग लगातार दुई वर्ष सम्पर्क गरेको उनले बताइन् । उनले आफूलाई केटाहरूले ँयुज एन्ड थ्रो’ गरेका कारण केटासाग भन्दा केटीहरूसाग सम्बन्ध गाँसेको पनि बताएकी छिन् । दीपशिखाले आफू महिला समलिंगी भएको र ३० जना केटी साथीसाग सम्बन्ध राखेको बताएकी छिन् । एउटा केटासाग आफ्नो ँइन्गेज्मेन्ट’ पनि भैसकेको र ऊसागको यौनसम्बन्ध राम्रै भए पनि चित्तबुझ्दो नभएकाले सम्बन्ध राम्रो नभएको उनले उक्त अडिसन भिडियोमा भनेकी छिन् । निकै उत्तेजक ढंगबाट लिइएको उक्त अडिसनलाई दीपशिखाले आफ्नो दोस्रो अडिसन भनेकी छिन् । अडिसनको अन्त्यमा ती पोर्न स्टारले दीपशिखासाग यौन सम्पर्क गरेका छन्, जसको भिडियो तथा ट्रेलर पनि वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ । अडिसनको ँफुल भर्सन’ हेर्न भने पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनका यौन भिडियोको थि्रडी भर्सन पनि तयार भैसकेका छ । माया अर्थात् दीपशिखाको भिडियो खिच्ने क्यामरा तथा प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।
Posted on 11-26-13 4:50 PM [Snapshot: 80] Reply [Subscribe]
Ma pani pornstar banna chahanchu, maile mero stripper gf sanga sex video banako chu, chittai sajha ma post garnechu
Posted on 11-27-13 1:18 AM [Snapshot: 840] Reply [Subscribe]
Last edited: 27-Nov-13 03:54 AM